14 Times When You Shouldn’t Use Your Credit Card | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » 14 Times When You Shouldn’t Use Your Credit Card
14 Times When You Shouldn’t Use Your Credit Card
Posted by kai on Oct 7, 2010 in Know-How, DIY, Money & Finance |2comments
ယူအက်စ်က လူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကရက်ဒစ်ကဒ်ကိုင်ထားသူတွေအတွက်ပါ။
အင်တာနက်ထဲလိုက်ကြည့်ရင်း အသုံးဝင်စရာမို့သိတာလေးတွေထည့်ပေါင်းထည့်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျား။
ကိုယ့်အကြွေးရာဇ၀င်လေးကို လွယ်လွယ်နဲ့ အပျက်မခံကြပါနဲ့။ လိမ်မဲ့လိမ်..အားရပါးရချေးယူပြီးမှသာ ဒေ၀ါလီခံလိုက်ပါ့နော။ မြန်မာတွေတော်တော်များများ သောင်းဂဏ္ဍန်းလောက်နဲ့ ဒေ၀ါလီခံနေတာ တွေ့ဖူးလို့ပါ။
အဲဒီတော့ အောက်ကအချက်ကလေးတွေ လိုက်နာပါ။ အကြွေးရာဇ၀င်လေးကောင်း။ FICOစကိုလ်းလေး ၇၅၀ကျော်မှ လုပ်ချင်တာလေးတွေ လုပ်ကြပေတော့..။
1. After midnight. ကလပ်တွေတက် ကာစီနိုကစားချိန် စိတ်က ရွှဲနေပြီမို့..ငွေသုံးစ၇ာပေါ်ရင်လည်းငွေသားသုံးနိုင်ရသုံး..မသုံးနိုင်ရင် အိမ်ပြန်ပါတဲ့..။
2. When you’re near your credit limit. တလသုံးဖ်ု့ လိမစ်က ၅၀၀။ ၁၀၀၀။ ၃၀၀၀ စသဖြင့်ရှိရာမှာ လိမစ်နားကပ်နေရင် ဆက်မသုံးဖို့ပါ။ တချို့ ကတော့ လိမစ်ရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံ သုံးပြီးရင်ောတင် ဆက်မသုံးတော့ဖို့ ပါတဲ့..။
3. When considering an extended warranty at the car dealership. ကားဝယ်သွား၇င် အတင်းထိုးေ၇ာင်းတတ်တဲ့ အာမခံ၊ ၀ရမ်တီတွေကို ထပ်ဝယ်တဲ့အခါမှာပေါ့..။
5. If you’re paying off one card with another, and it’sahabit: မြန်မာတွေတော်တော်များများ လုပ်လေ့ရှိတာပါ။ အကြွေးရရင် ဆင်ဝယ်စီးမယ်ဆိုပြီး ၀ယ်..။ ကဒ်တခုက အကြွေးကို နောက်တခုနဲ့ဆပ်တာမျိုးပေါ့။
6. Ataflea market: ဘာကောင်တွေကေ၇ာင်းနေမှန်းမသိ..။ ဘာမှန်းမသိတဲ့နေရာတွေမှာ မသုံးဖို့ပါ။
7. If you think you’re building your credit history: ပုံသေနည်းကတော့ လစဉ်အကြွေးအကုန်ဆပ်တာက အကြွေးရာဇ၀င်ကောင်းလာတတ်တာပါ။ အဲဒီလို လုပ်နေချိန်တဲ့..။
8. If you can’t pay for half of the purchase with cash on hand: တ၀က်လောက်ပေးနိုင်ဖို့ောတင် ငွေမရှိပဲ မ၀ယ်ဖို့ပါ။
9. When it’s all about the rewards points: ပွိုင့်တွေတက်အောင် များများဝယ်တာမျိူးပေါ့။ ဒါက တော်တော်များများ ဖြစ်နေကျ.။
11. To buy something fromawebsite with an obscure foreign extension: Don’t charge online if you don’t know who you are dealing with. မြန်မာတွေ သတိထားသင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကနေ တခြားနိုင်ငံကရောညင်းတဲ့ပစ်စည်းတွေကို လက်စွမ်းပြပြီး မ၀ယ်ကြပါနဲ့တဲ့။ ရက်၃၀ပြည့်လို့ ဒီကလိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ောတင်.. ကိုယ့်အကြွးရာဇ၀င်က တော်တော် ထိသွားတတ်လို့ပါ။
12. If you don’t haveaplan for paying it off: ငွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိပဲ မ၀ယ်ပါနဲ့
15. When the temptation forabig impulse buy strikes: သူများအတင်းထိုးရောင်းတိုင်းမ၀ယ်ပါနဲ့ပေါ့။ ရေငတ်နေလို့ ရေ၀ယ်သောက်တာမျိူးမဟုတ်တာမို့ .. ၂၄ နာရီလောက်စောင့်လိုက်ရင် ဒီပစ်စည်းဟာ ၀ယ်သင့်-မသင့် ပိုပြီး စဉ်းစားနိုင်မှာမို့ ပါတဲ့..။
တ၀က်လောက်ပေးနိုင်ဖို့ောတင် ငွေမရှိပဲ မ၀ယ်ဖို့ပါ။
ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက် ယူဆချက်နဲ့လုံးဝထပ်တူဖြစ်နေလို့ ခုမှဖတ်မိရင်းသတိထားမိလို့ ပါဗျာ
အဲဒီလို.. ဘာသာပြန်ရေးခဲ့ဖူးတာ.. မေ့တောင်နေတယ်..